राम्चेमा कोरोना कहर : संयमित हुँदै गाउँवासी - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ विचार/अन्तरवार्ता ∕ राम्चेमा कोरोना कहर : संयमित हुँदै गाउँवासी
राम्चेमा कोरोना कहर : संयमित हुँदै गाउँवासी
Sindhu Khabar शनिबार, २०७७ जेठ १० / १३:०९
बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नं ९ स्थायी ठेगाना भएकी २९ वर्षीय एक महिलाको १ जेठमा धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भयो । सरकारले आधिकारिक पुष्टि गर्नु पूर्व नै सामाजिक संजालमा मृत्युको कारण कोरोना नै हो भनी किटान जस्तै सामाजिक प्रयोगकर्ताले गरिसकेका थिए । फोटो सहित श्रद्धाञ्जली दिनेहरुको लर्को लागिसकेको थियो ।
अन्ततः जब स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै मृत्युको कारण कोरोना भनी पुष्टाइदियो तब सिन्धुबासीमा एक किसिमको भयानक डरले आसन जमाउन थाल्यो । लगत्तै बाह्रविसे नगरपालिका पुरै शील गरियो । अब के होला भन्ने भयंकर त्रासमा रहेका स्थानीयवासीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाबाटै महिलाको मृत्यु भएको घोषणा गरेसँगै प्रदेश, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, सन्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र धेरै सहयोगी हातहरुको साथ र सहयोग देखेर केही डर कमी भइरहेको थियो । उनीहरु राहतको सास फेरिरहेका थिए ।
त्यतिबेला स्थानीय यदि हामीमा पनि कोरोना लागेमा सरकारको सहयोग हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त पनि भए ।
यो घटनाले सिन्धुबासीहरु थप सतर्क हुन थाले । कोरोनाबारे सञ्चारमाध्यमबाट र हेकी हल्ला मात्रै सुनेका स्थानीयले आफैले देखे, अनि भोग । र, उनीहरु संयमित हुन थाले । घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाएर हिँड्ने, जथाभावी घुमफिर नगर्ने, घुलमिल नहुने जस्ता नियमको अरु कठोरताका साथ पालना हुन थाल्यो । हरेक विपत्तिलाई सहजतापूर्वक जित्दै आएको सिन्धुपाल्चोक अहिले कोरोना सँग लड्न पनि तयार भैसकेको अवस्थामा रूपान्तरित हुन थाल्यो । हुँदाहुँदै मान्छेहरु छिमेकका घरमा समेत जान छाडेको र केही घरले त पानीपँधेरो समेत बन्द गरेको पनि देख्न थालियो । यसले एकातिर गाउँलेहरुको थप सतर्कता देखाइरहेको थियो भने अर्कातिर अझै पनि सिन्धुसमाजमा कोरोनाबारे जनचेतनाको अभाव भएको संकेत गरिरहेको थियो ।
स्वास्थकर्मी द्वारा गरिएको कन्ट्याक ट्रेसिङमा लिइएको स्वाब परीक्षणमा उनको घरपरिवार लगायत सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि यहाँका बासिन्दाले केही राहत महसुस गरेका छन् । यो सँगसँगै एकसाता यता ठप्प रहेको जनजीवन फेरि बिस्तारै सामान्य हुँदै गएको देखियो ।
अहिले उनको माध्यमबाट कोरोना नसरे पनि अन्य व्यक्तिका मार्फत् कोरोना सर्न सक्छ त्यसैले हामीले सामाजिक दुरी कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सबै सचेत भैसकेको अनुभव गर्न थालिएको छ । साथै सामाजिक सन्जाल र विभिन्न ब्यक्तिहरुमा अनेकौं शंका उपशंका पनि उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ जस्तो कि सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आउँदा उनमा मात्र किन कोरोना देखियो ? के सरकारको परीक्षण नै त्रुटिपूर्ण छ? उनको मृत्युको कारण कोरोना नै हो त? ती सुत्केरी महिलाले काखमा राखेर खेलाएको र दूध खुवाएको शिशुलाई किन आमाबाट कोरोना सरेन? सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुराले यो घटनालाई कसरी मूल्यांकन गर्छ? यी शंका उपशंकाको जवाफ अहिले सिन्धुबासी सँगसँगै सबै नेपालीले खोजिरहेका छन्।
अर्को दुःखको कुरा कोरोनाबाट पीडित व्यक्तिका बारेमा उसको सम्पूर्ण परिचय नखुलाउने भन्दाभन्दै ती महिलाको तस्वीर समेत सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती पोष्ट्याइयो। यसले बाह्रबिसे र वरपरका बासिन्दाका मनमा डरको पहिरो गयो। यी सबै कुराहरु लाई मध्यनजर गर्दा के भन्न सकिन्छ भने सामाजिक सन्जालमा गलत सूचना फैलँदा अथवा व्यक्तिको पूरै परिचय खुलाउँदा सूचना प्राप्त गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिहरुमा नराम्रो असर पर्दो रहेछ। त्यसैले यस किसिमको सूचना सम्प्रेषणमा अझै कडा रोक लगाउनु जरुरी छ ।
कोरोना भाइरस मात्र नभएर भोलि जुनसुकै विपत्ति पनि पर्न सक्ने हुँदा त्यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न पूर्वतयारी हुनु पनि जरुरी छ ! अहिलेको यस महामारीमा समाजमा निम्न आय भएका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई निष्पक्ष तवरबाट सहयोग गर्नु पर्ने समेत देखिएको छ । समाजमा भएका स्रोत र साधनलाई सदुपयोग गर्दै विकास निर्माणका कार्य तर्फ अघि बढ्न स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले ठोस कदम चाल्नु पर्ने अवस्था छ ! कोरोना भाइरस सिन्धुपाल्चोकमा फैलन नदिन धेरै भन्दा धेरै परीक्षण गरिनु पर्ने स्थानीयको माग छ जसलाई सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो सम्बोधन गरोस् ।
सिन्धुपाल्चोकमा कोरोना भाइरस बाट यही एउटा मृत्यु बाहेक कोही संक्रमित नभएकोले आगामी दिनहरुमा पनि यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्न चाहन्छु । यसका लागि हामीले लकडाउनको पूर्ण पालना गरौं, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौं, समाजिक दूरी कायम राख्दै कोरोना विरुद्ध लड्न सक्षम बनौं र यदि कसैलाई कोरोना लागिहाल्यो भने उसलाई सामाजिक दुर्व्यवहार हैन सक्दो सहयोग गरौं। सम्झिराखौं, यस्तो विपत जुनसुकै बेला जो कोहीलाई पर्न सक्छ ।
ट्याग : #banner, #corona